Aan u turjunno waxaad noo keento sheekooyinka guul ka soo hoynta adduunka.
Aan ugu gudbinno luqada kasta farriimahaaga qof kasta oo jooga meel kasta.
Aan suuqa u soo dhigno sosaarkaaga magacaaga leh macaamiishaada dhaqannada badan.
Adeegyada Turjumidda iyo Afcelinta
Khibrad inn ka badan 30 sano ah iyo sumcad saldhig adag oo aad ku kalsoonaan karto
Shirkadaha ugu xoogga badani waa kuwa la xidhiidha dhammaan dhagaystayaashooda – iyadoon loo eegin luqadda ama goobta. INTRANSOL™ (International Translation Solutions™) waxay u heellan tahay dhiirigelin, awoodsiin oo ay ku xidho dadka, shirkadaha iyo sumcadahooda adduunka oo dhan iyada oo ku bixisa turjumid, afcelin, kombiyuutar ku daabacid luqadaha badan (dtp), ku dul duub cod, cod qorid iyo suuqgeyn dhaqamo badan in ka badan 200 kuqadood iyo lahajadood.
Haddii aad tahay shaqsi, milkiile mherad maxalli ah ama summad caalami ah oo raadineysa inaad ku xidhanto oo aad la xidhiidho macaamiisha dhaqamada badan, shaqaalaha ku meel gaadhka ama shaqaalaha buuxa, waxaan kuu ballan qaadeynnaa inaan ku siinno sida ugu qumman, dhaqan ahaan iyo farsamo ahaanba tarjumitaanno iyo afcelinno kaa caawiya inaad hanato hdafkaaga meherad.
Waxaan ku siin karnnaa turjumid xirfadaysan oo dukumenti shaqsiyadeed ama mid sharciyeed ah oo loogu talagalo maxkamadaha ama arrimaha socdaalka. Ama waxa dhici karta waxaad inaad u baahato afcelin isla goobta ah ama isku mar meel kala fog ah (RSI) looguna talagalo kulanno webinar, Zoom ama shirar toos loo sii daayo?
Ama haddii aya kula soo gudbboonaato baahi goobayn wax aad ugu talagasho bartaad internetka ama caawimo aad ugu baahato suuqgeyn dhaqanno badan si aad ugu xidhanto macaamiishaada kuu dhow ama meel fog adduunka kaga yaal, annaga ayaa kuu jooggnna! Xaqiiqdii, waxaan awoodnnaa inaan ku siinno arrimo xallin jaangoosan oo noqon kara caqabad la xidhiidha luqado badan oo luqad kasta noqon karta laga bilaabo Carabi ilaa Zulu.
Haddii aad ugu baahan tahay adeegyo turjumaad oo xirfad leh qiime aan ku eryin, waxaad timid meeshii saxda ahayd!
Markay tahay adeegyada luqad xirfadeedka INTRANSOL™, waxaad heli doontaa adeeg iyo taagero macmiil heer sare ah oo ay u weheliso tayada turjumidda ugu wanaagsan ee macquulka ah adiga ku hela qiime cadaalad iyo daacnimo ku dheehan tahay. Waxaan ka shaqaynnaa mashruucyo xajmi kasta leh oo waxaan haysnanna kheyraadka iyo baaxadda aan waxa kaga qabanno mashruucyada mugga wayn ee luqadaha badan.
Markaad u baahato in si sax ah hawsha laguugu qabto, kalsoonidaada sii Bixiyaha Adeegga Luqadda (LSP) leh sooyaal xaqiiq loo raadraaci karo in ka badan 30 sano. Ku kalsoonow INTRANSOL™.
Haddii aadan 100% ku qancin adeegyadayada, waxaan samayn doonnaa wax kasta oo ay qaadato si loo hubiyo bilaa su’aal inaad noqoto macmiil ku faraxsan waxa loo qabay.
Waxaan mar kasta garab taaganahay shaqadayada!
Hel u sheegid sicir LACAG lA'AAN Ah maantaba!